Cawska Ciyaaraha, Cawska Ciyaaraha, Sod Grass Mat - Wanhe
Cawska Kubadda Cagta
Cawska muuqaalka DIY ee suuqyada waaweyn
Muuqaalka Muuqaalka Dukaamada DIY chaim
Cawska Muuqaalka ee Ganacsiga
Cawska Muuqaalka ee Beerta
Cawska Muuqaalka Golf
Muuqaalka Cawska ee goobta ciyaarta
Tixraacyada Cawska Ciyaaraha Badan
Tixraacyada Cawska Xeegada
Tixraacyada Cawska Rugby
Tixraacyada Cawska Kubadda Cagta
Tixraacyada Cawska Muuqaalka
Tixraacyada Dukaammada jiifka / DIY
Tixraacyada Goobaha Ciyaaraha
Wanhe Warshadaha iyo Ganacsiga Co., Ltd.
Wanhe Grass waa nooc farsamo sare oo Internet ah oo isku dhafan R&D, wax soo saar iyo iibin waxaana ka go'an inay noqoto adeeg bixiye sumcad wanaagsan oo soo saar ah berrinka cawska macmalka ah. Huai'an Wanhe Warshadaha iyo Ganacsiga Co., Ltd. waxay ku taalaa Bangiga Biyo-mareenka Grand-Beijing-Hangzhou oo leh muuqaal qurux badan. Waa magaaladii Zhou Enlai, nin weyn oo fac ah, Huai'an City, Gobolka Jiangsu. Xinchang Railway iyo Wadada Isku Xidha Beijing iyo Shanghai waxay dhex marayaan magaalada gaadiid ku haboon. Wax soo saarka ugu muhiimsan waa cawska isboortiga iyo doogga muuqaalka iyo alaabooyin kale oo ay soo saarto warshaddeena. Waxaan la sameynay xiriir wadashaqeyn mudo dheer iyo xasiloon tafaariiqleyda iyo wakiilo badan 20-kii sano ee lasoo dhaafay.Eksport-yada waxaa lagu tiriyay in kabadan 80% wadarta iibka.
Muuqaalka Wanhe Grass ee golf-ka waxaa loo qaabeeyey loona soo saaray iyadoo loo eegayo waaya-aragnimada cagaaran ee dhabta ah, iyadoo la siinayo xaqiiqo aan la qiyaasi karin marka loo eego muuqaalka dusha sare iyo waxqabadka. Hufnaanteedu kaamil ah ayaa damaanad qaadaya duubista saxda ah ee kubbadda waxayna siisaa raaxo farxad leh inta lagu ciyaarayo.
Khibrada Wanhe Grass ee abuurista cows macmal ah oo loogu talagalay dhowr isboorti ayaa noo ogolaanaya inaan siino alaab heer sare ah oo loo adeegsado ujeedooyin badan, sida 11-a-side iyo 7-a-side kubada cagta, kubada cagta iyo garoonka xeegada iyo kubada cagta iyo rugby field .
Ma ogtahay in macaamiil aad iyo aad u tiro badani ay ka iibsadaan cawska macmalka ah Bakhaarada Chain ama DIY dukaamada Waa alaab cusub oo iib ah oo kulul oo loogu talagalay dadka DIY. Wanhe Grass Landscape waxay soo gashay dukaamo caan ah oo loo yaqaan 'Chain' oo ay ka buuxaan khibrad u siinta dukaamada silsilada ah oo leh fursado kala duwan: duub 2X25m, duub 1x4m, rooga 1X1m, suufka 30X30cm.
Wanhe waxaan kula shaqeeyaa 5 sano caws. Waa doog dhab ah! Waxaan u adeegsadaa mashaariicdayda muuqaalkeyga waxaanan ka helaa jawaab celin weyn isticmaalaha, waxaanan helaa ganacsi weyn iyo guul Mahadsanid Wanhe Grass Team.Waan kugula talin lahaa badeecadan!
Haddii aad ka fekereyso inaad tan kuu iibsato, ma niyad jabi doontid. Waxay leedahay dareen caws dhab ah oo ah doog buuxa oo isticmaalaya dhaadheer.Waa wax soo saar aad u wanaagsan qiimo aad uwanaagsanna wayna u shaqaysaa!
Aad u waara oo si fiican loo sameeyo. Leh laba sagxad aad u kala duwan oo wax lagu garaaco ah si loogu daro xaqiiqda. Tayada sare! Soo saaraha wanaagsan! Ma jiraan arrimo la xiriira sheyga gabi ahaanba. Tani waa wixii aan raadinayay. Cabbirka ku habboon dhammaan naadiyadayda.
Super soo saaraha lagu taliyay! Gaarsiinta degdegga ah. Tayada badeecada oo wanaagsan, cawsku waa jilicsan yahay oo dhab yahay. Qalabka xirmada sidoo kale waa mid aad u wanaagsan. Waxay leeyihiin tayo sarreysa oo awoodda wax soosaarka annaga ayaa noo qeexan maxaa yeelay waxaan ognahay inay alwasy naga siin karaan xalka. Kooxdooda wax iibinta iyo iibintoodu waa xirfadle. Lagu taliyay.
Jabbaan-- な か だ
Xayawaan Xirfadle Cagaar Caan ah oo Cows ah oo loogu talagalay muuqaalka. Iibiyaha wuxuu ahaa mid xirfad badan isla markaana dhaqso uga jawaaba su'aalaha. Shirkaddu guud ahaan waxay umuuqataa mid adeeg macaamiisha u janjeedha. Waxaan kugula talin lahaa inaad ganacsi la yeelatid iibiyahan markale mustaqbalka.
Alaab aad u tayo wanaagsan, iyo adeeg saaxiibtinimo leh, shirkad aad u xirfad badan. Mahadsanid Wanhe Grass, waanu iskaashi dhow dhow.
MAXAAY KA YAHAY MACAAMIILA
Xiriirinta La Xiriira:
Garoonka Kubadda Cagta ee Astro Turf, Cawska Dhirta Dhirta Dhirta Dhirta, Kubadda Cowska Cows, Lawn Artifishal ah, Ku dayashada Roogga Cawska, Cawska Golf Artificial,